Nezvedu - Anping Zhuona Wire Mesh Co., Ltd.
isu takazvipira kupa iyo yepamusoro-inoshanda mafirita
AHT / Anping Zhuona Wire Mesh Co., Ltd. inyanzvi yekugadzira nekugadzira, kutsvagisa uye kugadzirwa kweakasiyana mafirita firita zvinhu uye firita zvigadzirwa. Iwo makuru zvigadzirwa anosanganisira Sintered waya pajira riya, Sintered akanzwa, Pleated firita chinhu, Sintered Sefa chinhu, Wedge Sefa chinhu, Leaf dhisiki firita, Proclean Sefa, Filter katuriji, Rimed Sefa discs uye zvimwe firita zvigadzirwa. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mu petroleum, indasitiri yemakemikari, indasitiri yemishonga, chemakemikari faibha, muchadenga uye ndege, simbi, kurapwa kwemvura, chikafu nechinwiwa, marasha emakemikari indasitiri, kurapwa kwemotokari nemimwe minda nemaindasitiri.
Zhuona ine timu yeR & D inehunyanzvi, ine hunyanzvi uye kusimudzira, isu takazvipira kupa mafirita anoshanda zvakanaka, mafirita emhando yepamusoro uye mafirita ekupedzisira-kugadzirwa kune vatengi vedu. Kubva pane dhizaini, kutsvagurudza kusvika mukugadzira, isu tanga tichiedza nepatinogona napo kusangana neyakagadzirwa dhizaini uye zvingangodiwa zvevatengi, uye kupa vatengi vedu mhinduro inovimbika yekusefa.
Panguva imwecheteyo, Zhuona ine yakasarudzika mhando yekudzora system, iyo inogonesa kambani yedu kuchengetedza chinzvimbo chinotungamira muhunhu hwechigadzirwa uye makwikwi ebasa. Parizvino, kambani yedu ine yepamusoro vharuvhu sintering michina, yepamusoro-yekuita vharuvhu elektroni danda rinotenderera muchina, chaiyo uye yakakwana yekuyedza michina, iyo inogona kuzvimiririra kupedzisa dhizaini uye kugadzirwa kwefaera zvinhu uye firita; uye pedzisa dzakasiyana firita zvinhu uye inonatsa utsanana kutsunga uye kusvibiswa kuongororwa zvakare zadzisa ese ese mafirita mashandiro ekuonekwa, kupa akavimbika vimbiso yezvitsva zvigadzirwa 'kutsvagisa nekusimudzira.
Zhuona ine yakasarudzika mhando kudzora system, iyo inogonesa kambani yedu kuchengetedza inotungamira chinzvimbo mune chigadzirwa mhando uye sevhisi makwikwi.
- isu takazvipira kupa iyo yakasarudzika-inoshanda mafirita.
Stainless Simbi Sefa, Mafirita Emhepo, YeMotokari Sefa, Stainless Simbi Mhepo Kuchenesa, Sefa Yemvura, Industrial Gasi Sefa,